Echefuola wax nkedo ihe eji eme ihe eji eji ihe eji eme ihe na petrochemical ụlọ ọrụ na ndị na-ebu ya | Atụmatụ
Echefuola wax nkedo Ihe eji ere ihe eji eme ihe na ulo oru petrochemical
Burner bụ ụdị ngwa ọrụ mechatronics nwere ogo dị ukwuu nke akpaaka. Nke a na ụdị burner ngwa na-eji thermal ike osisi ụlọ ọrụ.
Burner bụ isi nke kpo oku na oku na nụchara anụcha, petrochemical na chemical ụlọ ọrụ.
Anyị na-aga n'ihu na-enyocha ma mepụta ihe kachasị mma mmanụ na gas na-ere ọkụ iji nweta arụmọrụ kacha mma na obere anwuru, na-eji teknụzụ kachasị elu n'ụwa n'ihe banyere ntụkwasị obi na arụmọrụ.
Site na injinịa ruo n'ichepụta ngwaahịa ikpeazụ, anyị na-achịkwa usoro mmepụta niile.
Echefuola wax nkedo Ihe eji ere ihe eji eme ihe na ulo oru petrochemical HK Industrylọ ọrụ Petrochemical ISO 8062 CT7 0,7 n'arọ
Green wax burner ngwa HH Industrylọ ọrụ Petrochemical ISO 8062 CT6 0,29 n'arọ
Ezubere ọkụ ahụ dịka ọkọlọtọ API 535 ma nwee ike ịhazi ya dịka ihe ndị ahịa chọrọ.
Osisi Petrochemical na-ewepụta ihe ndị sitere n'okike dịka mmanụ mmanụ, gas, mmanụ na mineral n'ime ngwaahịa, nke a na-ejikarị eme ihe. Ha na-emepụta ọtụtụ ihe dị mkpa maka usoro ọrụ mmepụta ihe, gụnyere ethylene, propylene, butadiene na aromatics.
Ndị na-ere ọkụ gas nke ụlọ ọrụ dị na nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Dị ka onye na-ere ọkụ si ere ọkụ, enwere ndị ọrụ ọkụ gas na ụlọ ọrụ mmanụ ọkụ.
Workingkpụrụ ọrụ nke ọkụ gas dị nnọọ mfe. Mmanụ gas ma ọ bụ ikuku, ma ọ bụ ikuku mmanụ na ikuku na-abanye n'ime ụlọ ọkụ nke onye na-ere ọkụ. Akpọrọ ọkụ na-agba ọkụ na-ewere ọnọdụ. Igwe ọkụ na-enye uru kpo oku maka ngwa ahụ.
Na mpaghara ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ikuku gas na-ahụkarị bụ acetylene, LNG na propane.
Maka ngwa, a na-eji ọtụtụ ndị na-ere ọkụ gas na ụlọ ọrụ ọkụ na ọkụ.
Dị ka onye na-ebute ndị na-ere ọkụ n'ụlọ ọrụ mmepụta ihe, Ruichang nakweere teknụzụ combustion kachasị elu iji mepụta ndị ọkụ na-atụkwasị obi. Ọ na - achota na onye na - ere ọkụ nwere arụmọrụ ọkụ dị elu ka ọ na - edebe nsị.
Nke gara aga: Nouel mmanụ a mere na China
Osote: Igwe anaghị agba nchara mwekota nke mgbatị akụkụ
304 Igwe anaghị agba nchara Nkedo
Nkedo Foundry China
China Nkedo Foundry
Investment Nkedo China